Enjehan’ny Mpitsara Ireo Vata-miaramila Voampanga Ho Namono Olona Tao Ginea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2013 5:29 GMT
[Mitondra amin'ny vohikala teny Frantsay avokoa ny rohy rehetra afatsy ireo izay voalaza manokana. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mialohan'ny nitrangan'ireo disadisa tao Guinea.]
Ny tompon'andraikitry ny hery fiarovana manokana ny Filoha ao Guinea no olona noahiahiana farany ho nanome tànana tamin'ilay famoretana tamin-kerisetran'ny hery mitam-piadiana [en] tamin'ilay hetsi-panoherana nataon'ny mpanohitra ny taona 2009, izay farafahakeliny nahafatesanà olona miisa 157 ary nanolanana zaza amam-behivavy maro be.
Ny 28 Septambra 2009, nitifitra ireo mpanao hetsi-panoherana avy amin'ny mpanohitra izay nanoheran'izy ireo ilay miaramila Filoham-panjakana, Dadis Camara sy ny fikasàny hilatsaka ho fidiana mandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena ny volana Janoary 2010 izany.
Taorian'ilay vono olona nahatsiravina, dia nandà ny maha tompon'andraikitra azy ireo tamin'ilay vono olona i Camara sy ireo mpikambana ao amin'ny “junta / fitondrà-miaramila”. Ny Vondrona Iraisam-pirenena dia nanasazy ny junta [en] tamin'ny fanaovana fahirano ny fanafaran'izy ireo fitaovam-piadiana sy ny fandraràna ny fivoahan'izy ny fireneny, ary nangihy ny kaonty tany amin'ny banky an'ireo manampahefana voarohirohy rehetra tamin'izany fotoana izany. Herintaona taty aoriana, notifirin'ny miaramila [en] mpiaraka aminy akaiky i Camara.
Herinandro vitsivitsy taorian'ilay vono olona, nanokatra fanadihadiana mahaleotena manokana tarihinà kaomisiona iray ahitàna mpikambana miisa 31 i Camara. Na dia izany aza, ny fianakavian'ireo maty dia nangataka tamin'ny fikambananana Mpiaro ny Zon'olombelona hijery akaiky iny vono olona iny [en] sy ireo fandevenana an-tsokosoko voalaza fa nataon'ireo miaramila.
Namoaka didy fampisamborana ny Kôlônely Claude Pivi, izay lehiben'ny mpiaro ny filoham-panjakàna ny fitsarana mpanao famotorana, ny 27 Jona 2013 taorian'ny nandrenesan'izy ireo ny fijoroana vavolombelon'ilay kômandin'ny polisim-pirenena, ny Jeneraly Ibrahima Baldé. Ny andro nanaraka io dia tonga tao amin'ny lapan'ny fitsarana hihaino ny vesatra niampangana azy i Pivi, ary tokony hiverina hiseho fitsarana indray izy ny 04 Jolay, nefa tsy namaly izany fampiantsoan'ny fitsarana izany.
Naneho ny hafaliany tao amin'ny afrik.com ilay bilaogera Assanatou Baldé :
Tonga ny fotoana hizakan'i Claude Pivi antsoina hoe Coplan ny nataony.
Ny Human Rights Watch dia namoaka vesatra ho an'io mpiasam-panjakana ambony tao amin'ny governemantan'ny filoha Alpha Condé io, izay nomena mariboninahitra ny taona 2011:
Ilay olona ahiahiana, Lietnà-Kolonely Claude “Coplan” Pivi, dia Ministra Gineana nisahana ny Fiarovana Manokana ny Filoha, toerana niandraiketany tamin'ny fotoana nitrangan'ilay vono olona ny taona 2009. Araky ny nambaran'ireo filazam-baovao, dia voarohirohy tamin'ny famonoana olona, fanolanana, doro trano, ny fandrobàna, ny famotehana ireo vakoka sy ny firaisana tsikombakomba i Pivi. Araky ny lalàna Iraisam-pirenena, tsy meloka aloha i Pivi raha tsy efa nandalo fitsaràna sy namoahana didim-pitsarana manameloka azy.
Ilay vohikala aminata.com dia namoaka fanambarana an-gazety iray niarahan'ireo Fikambanana maro Mpiaro ny zon'olombelona ao Guine natao. Toy izao ilay tatitra :
Hatramin'ny fanombohan'ny fanadihadiana, efa maro tamin'ireo niharan-doza no niahiahy fa mety ho afaka eo anatrehan'ny fitsaràna amin'io raharaha io i Claude Pivi noho ny toerana misy azy sy ny toerany ao amin'ny antanan-tohatra miaramila. Omaly no nentin'ireo mpitsara mpanao famotorana ny valinteniny voalohany tamin'ny fanamelohany azy mivantana.
Tanatin'ilay lahatsoratra iray tao amin'ilay vohikala guineenews.org, Sarifou Barry nitatitra ny tenin'i Dokotera Thierno Maadjou Sow, Filohan'ny Human Rights Organisation (OGDH) ao Ginea:
Raisinay amin'ny fomba fijery ara-poto-kevitra ho manan-danja tokoa izany, indrindra eo anatrehan'ny ady atao ho fanajàna ny zon'olombelona sy ny ady amin'ny fisian'ireo tsimatimanota izay zezika mampiroborobo ireny heloka be vava ireny. Tsy tokony ho adinoina fa nisy olona ambony maro voarohirohy sahady tamin'io raharaha io saingy indrisy fa tsy nitondra nankaiza akory izany. Mbola mitàna andraikitra ambony amin'ny firenena ihany ireny olona ireny hataramin'izao. Fantatrareo ve fa taorian'ireny heloka bevava ireny, efa nomelohin'ny Filan-kevi-pilaminana ao amin'ny ONU ” sy ireo Fikambanana Mpiaro ny zon'olombelona ho heloka bevava fanitsakitsahana ny maha olombelona ireny.
Asmaou Diallo, Filohan'ny Fikambanan'Ireo Niharam-boina , Ray aman-dreny sy Naman'Ireo tamin'ny 28 Septambra (AVIPA), izay nanaovan'i Sarifou Barry fanadihadiana ihany koa, no namoaka ny fihetseham-pony tao amin'io lahatsoratra io ihany, tamin'ireto teny ireto :
Fitakian'ny iray niharan-doza ny mba hisian'ny fampiharana ny lalàna amin'io raharaha io. Mampitony anay ihany raha toa ka voaheloka i Kolonely Claude Pivi kanefa tsy ampy izany. Tsy hoe miampanga fotsiny dia avy eo hidiana anaty vata ilay raharaha. Na dia izany aza, mampiakatra ny moralinay ihany io fanamelohana io, saingy mila zavatra mihoatra noho izany izahay. Takianay ny fialan'ireo rehetra voarohirohy tamin'io raharaha io amin'ny toerana maha-tompnandraikitra azy ireo mba ho afaka entina manoloana ny fitsarana.
Nahatonga ny mpamaky haneho ny heviny ihany koa ity lahatsoratra ity. Ohatra, Ardho dia nanipika manokana ny fahasahian'ireo mpitsara nanameloka ny Kolonely Pivi sy ireo manam-boninahitra ambony ao amin'ny hery mitam-piadiana :
Mihevitra aho fa tokony ho tohanantsika ireo mpitsara ireo izay mizotra tsimoramora ao anaty fepetra izay fantantsika tsara, kanefa tena mandray andraikitra lehibe amin'io raharaha goavana io… Antenanintsika handray an-tànana ny fanesorana ireo adala ireo amin'ny toerana itànany andraikitra ny governemanta.
Tao amin'ilay fanambarana an-gazety nolazaina tetsy aloha, dia naneho ny ahiahiny ihany koa ny Fikambanana Mpiaro ny zon'olombelona ao Ginea :
Ny fikambanana misy anay dia maneho ny ahiahiny mikasika ny fahadiovan'ny dingam-pitsarana sy ny fiarovana ireo mpisehatra na ireo niharam-boina mitondra ny vavolombelony amin'ity raharaha ity, nohon'ny toerana iandraiketan'Ingahy Pivi amin'izao fotoana izao. Araky ny fangatahana [tsy fiankinan-doha sy tsy fisian'ny fiangarana] nataon'ny fikambanana misy anay mikasika ny Kolonely Moussa Oumar Tiegboro Camara, voaheloka ny volana Febroary 2012, sy ny komandà Sekou Resco Camara, Governoran'i Conakry, voaheloka tamin'ilay raharaha fampijaliana ny volana Febroary 2013, kanefa samy voatazona amn'ny toerana misy azy ihany, mangataka amin'ireo mpisehatra amin'izany izahay mba handray ny fepetra rehetra hahafahana mametraka dingam-pitsarana tsy miankin-doha sy tsy miangatra, ao anaty fanajàna ny zo hahazo ftsaràna tsy mitanila. Noho izany mangataka ny hanisahana ireo manam-boninahitra ambony ireo izahay, izay voampanga fa nanao zavatra tena mihoatra ny fefy.
Almamy Camara nanoratra lahatsoratra toy izao ao amin'ny afrik.com:
Ny Fikambanana Iraisampirenana Mpiaro ny zon'olombelona na ny Human Rights Watch (HRW) dia nanao antso ny 03 Jolay ho amin'ny fampiatoana amin'ny asany ao amin'ny governemanta ireo rehetra voarohirohy, ary nanasa ireo manam-pahefana rehetra hiaro ireo mpitsara sy ireo niharam-boina tamin'ilay Heloka bevava ny 28 Septambra 2009. Tohin'ilay fanamelohana ny Ministry ny Fiarovana Manokana ny Filoha, Claude Pivi antsoina hoe Coplan ity antso ity, fanamelohana izay nataon'ireo mpitsara mpanadihady ny Alarobia lasa teo.
Boubacar Bah dia naneho ny ahiahiny mikasika ny mety ho tohin'io raharaha io tao amin'ilay lahatsoratra nivoaka tao amin'ny guineedirect.org, izay miompana indrindra amin'ny fisian'ny tsimatimanota sitrahan'ireo olona sasany miandraikira ny tafi-panjakana Guineana toa an'i Kolonely Pivi ary io fitsarana io ihany no niampanga azy ireo:
Kanefa ho an'ireo mpanara-maso mahara-baovao, na inona na inona finiavan'ireo vondron'ny mpitsara hanao izay hampazava io raharaha io, raha tsy misy ny fandavan-tenan'ireo mpanao politika dia ho very maina ihany izany. Ahiahy maro no miantefa amin'ny filoha Alpha Condé izay voalaza fa tsy te hisaraka mihitsy amin'i Claude Pivi sy Tiegboro. Mazava ho azy, satria tena nanohana azy fatratra ireo lehilahy roa matanjaka tamin'ny andron'ny Kapiteny Dadi ireo tamin'ilay fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2013. Tsy sitrak'i Alpha Condé ny hanary ny vaton'ireo mpifidy azy tao amin'ny faritr'alan'i Ginea, “Guinean Forestry” izay tanàna fiavian'i Pivi sy Tiegboro talohan'ilay fifidianana ho solombavam-bahoaka ny 2013. Raha hisafidy amin'ny famoahana ny marina momba ireo vono olona ny 28 Septambra sy ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka, dia naleon'i Alpha Condé nifidy ilay faharoa.
Ho fanehoan-kevitra tamin'ilay lahatsoratra nivoaka tao amin'ny guineenews.org, dia nanontany tena Ingahy Sylla hoe :
Ahoana moa no hiandrandranao fanarahan-dalàna ao anatinà vala iray fiompiana biby. Na izany na tsy izany, vao voalohany no nitranga izany, ka aleo miandry dia ho hita eo, nefa gaga aho raha misy fanarahan-dalàna izany eo. Voalohany aloha, nentiny nanaraka azy tamin'ilay famotorana azy ireo mpiambina azy manokana, zavatra izay tsy azo ekena any amin'ny firenena mandroso sy tsy araky ny lalàna. Koa raha amin'ny fotoam-pitsarana izany, raha hisy ny fitsarana azy, moa tsy ho entiny ao daholo hatramin'ny tafika iray manontolo ve. Efa lazaiko aminareo fa vala iray fiompiana biby ity firenena ity.
Mba hahafahana mandanja ny loza mitatao amin'ireo mpitsara sahy niampanga dia nandrahona azy i Kolonely Pivi, ato no ahitana ny fihetsiny araky ny tatitry ny lahatsoratra iray nosoratan'i Boubacar Bah :
Tamin'ny fotoana nanambaran'ny fikambanan'ny mpitsara tamin'i Pivi ny mahatafidira azy amin'ilay raharaha fahafatesan'olona maro be ny 28 Septambra, dia tena romotra itty manam-boninahitra. “Diso hevitra ny olona raha mihevitra fa afaka ny hanalabaraka ahy toy izao eto amin'ity firenena ity, izahay no nanompo ity firenena ity,” hoy ny fitarainan'i Coplan araka ny tatitra.
Ireo mpanohana an'i Pivi dia nihetsika mba haneho ny fanohanany azy nandritry ny famotorana natao azy.
Tokony hanery ny filoha Alpha Condé ny Vondrona Iraisam-pirenena sy ireo Gineana mpiaro ny zon'olombelona mba hiaro ireo mpitsara sy ireo vavolombelona, amin'izay hoesorina amin'ny toerany ka hotsaraina ireo manam-boninahitra voampanga taminà heloka bevava na tafiditra ao anatin'ny lisitry ny olona noahiahiana no nanao heloka bevava manohintohina ny maha-olombelona.